Bullypit: Ndi American Bulldog Pitbull gwakọtara ụdị nkịta gị? - Reeddịrị
Bullypit: Ndi American Bulldog Pitbull gwakọtara ụdị nkịta gị?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụdị nke nwere ike ịbụ nkịta na-eche nche dị egwu, gịnị ma ị nwee njikọta nke abụọ? American Bulldog Pitbull mix, makwaara dị ka Ehihie , nwere ike bụrụ naanị canine ị na-achọ.
Ogwu a nwere ike iyi gi egwu, mana ha gha eme gi nkpuru, ma dika anu ulo ma obu ka ha na aru dika nkita na eche nche ma obu dika onye nlere anya.
Chọrọ ozi ndị ọzọ gbasara Bullypit?
Kedu ihe bụ Bullypit?
Ihe ojoo na egwu American Bulldog Pitbull mix
Iwe: Gịnị bụ Pitbull Bulldog mix?
Ilekọta ngwakọta American Bulldog Pitbull
Ndi Bullypits dị mma?
Ebee ka m nwere ike ịhụ ụmụ nkịta Bullypit maka ọrịre?
Ikwesiri inweta American Bulldog Pitbull mix?
Ndị nkịta ndị na-ese ihe anọwo na nwa oge, mana ụfọdụ na-ekwu na ngwakọta American Bulldog Pitbull nwere ike bụrụ nke mbụ mere n'ime afọ 30 gara aga ma ọ bụ karịa.
Yabụ, iji nyere anyị aka ịmatakwu banyere ụdị agwakọtara agwakọta a ma mara ihe ị ga-atụ anya banyere ọdịdị na omume ha, ọ dị mkpa iji nlezianya leruo ndị nne na nna dị ọcha anya.
Nchebe American Bulldog
O bu ihe nwute, otutu udiri anumanu nwere udiri akuko, nke bu otu ihe maka American Bulldog . A na-azụ ndị nna ochie ndị a dara ogbenye 'bekee na baiti na ehi ruo na 1835 mgbe a machibidoro omume a jọgburu onwe ya.
Agbanyeghị, ha ka ga-anọrịrị ka mmachibido iwu ahụ pụtara na e lekwasịrị anya na ịzụlite nkịta ndị a maka ịlụ ọgụ maka nkịta.
N'ihi na a zụrụ ha dị ka nkịta na-alụ ọgụ, nkịta ndị a bụ gbara ume ime ihe ike , na ụdị obi ike ha mere ka Bulldog zuo oke maka ọrụ ndị ahụ chọrọ.
Ka oge na-aga, ndị si mba ọzọ webatara nkịta ndị a na America, n'ihi iguzosi ike n'ihe ha, nke siri ike nghọta, edoziri ha ka ha rụọ ọrụ na-echekwa ihe onwunwe na egwuregwu ịchụ nta na ugbo. N’Agha IIwa nke Abụọ, agbụrụ American Bulldog fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị.
Stocky na muscular , American Bulldog nwere ikike ịgba ọsọ magburu onwe ya ma mara ka ọ gafere elu isii ma ọ bụ karịa n'ime ikuku. Ha na-adịkarị sentimita iri abụọ ruo iri abụọ (iri asatọ ma ọ bụ iri asatọ n’ogologo) n’ogologo ma dịrị n’agbata kilogram iri abụọ na asaa ruo iri abụọ na abụọ (iri asaa na asaa ruo iri anọ na ise).
Enwere ọtụtụ ụdị nke American Bulldog, gụnyere ụdị Johnson (nke a na-akpọkwa Iji ike emegbu mmadụ ma ọ bụ Omuma ), nke buru ibu, buru ibu, ma nwekwa ahụ nwere mbara sara mbara.
E nwekwara ụdị Scott (a na-akpọkwa ya Ọkọlọtọ ma ọ bụ Ọrụ ), nke nwere ogologo, na-adọrọ adọrọ, na-emekwu egwuregwu. Nwekwara ike ịchọta ngwakọ nke ụdị abụọ dị iche iche nke American Bulldog.
O di nwute, American Pitbull Terrier nwere akụkọ yiri ezigbo ya na nke American Bulldog. A na-ejikwa ụdị a maka bear na ehi na-emechi ya na mgbe e mesịrị maka ịlụ ọgụ.
N'ihi nke a, a dị ọcha amatawo aha ya dị ka ihe dị egwu, ọ dịkwa njọ n'uzo na ezighi ezi inweta otu na ebe ufodu, obughi na U.S., kama na gburugburu uwa.
Pitbull America na-enwekarị mgbagwoju anya na Onye America Staffordshire Terrier . Otu American Kennel Club (AKC) nyere nkịta a aha a n’afọ 1930 ka ọ gbalịa ikewapụ ụdị anụ ahụ na ọgụ ya.
N'ihi nke a, ndị AKC amataghị Pittie a dịka ụdị nke ya. Agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ kwenyere na ha abụọ dị iche na Staffordshire Terrier nke pere mpe.
Ndị a nkịta dị ike guzo ihe dị ka sentimita 17 ruo 19 (43 ruo 48 cm) n'ogologo ma dịrị n'agbata kilogram 30 na 85 (kilogram 14 ruo 38). Ha nwere obosara sara mbara, nke dị larịị nke nwere obere ntị, obosara, nke dị ike, na ọdụ dị mkpụmkpụ, nke nwere akara.
Uwe ha dị mkpụmkpụ, nke na-adị ire ụtọ dịgasị iche na agba mana ọ na-abata n'ụdị abụọ, ya bụ Blue Imi Pitbull na Red Imi Pitbull .
Dị ka aha ahụ na-egosi, ụdị dị iche iche na-acha anụnụ anụnụ nwere imi na agba na-acha awọ ma ọ bụ unyi, ebe Pitbull na-acha uhie uhie nwere imi pink na ajị anụ na-acha ọla kọpa.
Ihe ojoo na egwu American Bulldog Pitbull
N’agbanyeghi na olulu eji eme ihe n’egosi odi ujo nye ndi ozo, onu ya n’onu ya na ochi ya puru ime ya ka nkita gi na-achi gi ochi.
Bulldog Pitbull mix n'ozuzu ya gbasiri ike ya na igbe sara mbara, nke siri ike azu, ukwu ya abua, na ukwu ya.
Ha nwere isi sara mbara ma dị larịị nke nwere obere mkpụmkpụ, na floppy ma ọ bụ ntị rosebud. Ọdụ ha nwere ike ịdị ogologo ma dịkwa warara.
Iji nye gị echiche ka mma banyere otu ngwakọta American Bulldog Pitbull ga-adị, lee vidiyo a:
Kedu otu nnukwu ngwakọta American Bulldog Pitbull ga-esi buru ibu?
Gafe American Bulldog na American Pitbull Terrier ga-ebute na a ọkara na nnukwu-sized nkịta na-anọchi na nkezi elu nke 20 ruo 24 sentimita asatọ (50 ka 60 cm) wee tụọ n'etiti 40 na 80 pound (18 na 36 n'arọ).
N'ihi oke ya, PitbullBulldog adabaghị nke ọma maka ndụ ụlọ ma ọ ga-aka mma ibi ndụ na ugbo ma ọ bụ, ma ọ dịkarịa ala, ụlọ nwere nnukwu, ogige a gbara ogige nke nkịta nwere ike ịgagharị.
Uwe nke American Bulldog Pitbull mix
Ọ bụ ezie na uwe nke American Bulldog Pitbull mix dị mkpụmkpụ, dị mma, ma dị mma, ụdị a bụ ọ bụghị hypoallergenic ma si otú a agaghị adabara ndị mmadụ nwere ihe nfụkasị ahụ.
Pdị Pitbull, ma ọ bụrụ na ọ na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha uhie uhie, ga-emetụta ọdịdị na agba nke nwa Bullypit.
Dabere na nne na nna ya, nwa American Bulldog Pitbull mix puppy nwere ike ị nwere ọtụtụ agba dị ka ojii, tan, ọbara ọbara, odo, isi awọ, ọlaedo, ude, na ọcha.
isi mmalite : American Bulldog Red Nose Pitbull mix
American Bulldog Pitbull bụ ihe nchebe dị oke egwu nkịta ma ga-egosipụta a ihu ọchị ma ọ bụrụ na ọ na-elekọta mmadụ ma zụọ ya mgbe ọ bụ nwa nkịta.
Zụ nkịta Bullypit puppy nwere ike ibido ozugbo izu asatọ . Ime nke a ga - eme ka fido a nwee ezi agwa.
Dịrị njikere maka usoro ọzụzụ ma ọ bụ ịma aka. N'ihi njirimara ha, enweghị ndidi, ha ga-achọ aka siri ike na onye nwe ya.
Ọ dị mma ịnweta ahụmịhe mgbe ị na-emeso ụdị a n'ihi na ọ bụrụ na nke a bụ oge izizi ị nwere nkịta, Bullypit nwere ike hụ ya.
Echefula na nkwado dị mma dị mkpa mgbe ị na-ezi nkịta ọ bụla, ma ọ bụ nke dị ọcha ma ọ bụ nke obe.
Ngwakọta American Bulldog Pitbull nwekwara ike ịkpachara anya na ndị bịara abịa na nkịta ndị ọzọ. Na na kwuru, ha nwere ike a ọchịchọ iwe iwe , karịsịa na obere anụ ụlọ. Akụkọ banyere ndị nne na nna canine a nwekwara ike rụọ ọrụ na nke a.
Dị ka ọ bụla ezigbo nche , Ndị na-eme ihe ike na-amasị ịgba ụja ma dabara adaba n'ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na a kụziiri gị ma mee ya n'ụzọ ziri ezi, ịnwere ike ịtụ anya enyi enyi na-atọ ụtọ nke ukwuu na ụdị a. Ha bụkwa nkịta nwere ọgụgụ isi dị ukwuu nke na-ahụ nlebara anya ma na-ekpori ndụ.
You nwere ike ịchọpụta etu smart American Pitbull si dị na vidiyo a, ebe a na-azụ mmadụ ịnọdụ ala, pụọ, ma weta:
Ihe ole na ole ị ga-ebu n'uche ma a bịa n'inwe ụdị a - n'ihi uwe mwụda ha, obe a adịghị eme nke ọma na ihu igwe dị oke ọkụ ma ọ bụ oyi.
Otu akwa ajị anụ ha anaghị enye nchebe dị ukwuu na ọbụlagodi na Bulldog Pitbull nwere ike ịmị ọkụ ma chọọ iji sunscreen!
Kedu ụdị mmega ahụ fido a chọrọ?
Nke a ngwakọ pụtara nọ n'ọrụ, na dịkarịa ala 90 nkeji mmega ahụ kwa ụbọchị . Onga njem ga - enyere nkịta a aka ịkpa ezi agwa ma nwekwaa obi ụtọ.
Ya mere anyị na-akwado ha ka ezinụlọ na-arụsi ọrụ ike na-enwe ọ spendingụ iwepụta oge n'èzí ma na-ewere enyi ha canine na-agba ọsọ, na-agba ọsọ, na njem.
Maka mmetuta nke uche, ịchụ nta akụ, ma ọ bụ zoo & ịchọ ihe egwuregwu ụmụaka kachasị amasị ha ma ọ bụ ọgwụgwọ bụ nnukwu ọrụ.
Naanị gaa na ogige ndị nkịta ma ọ bụrụ na azụrụ ma bulie Bullypit gị. Ga-amụrụ anya mgbe ị na-ekwe ka pooch gị na nkịta ndị ọzọ gwuo egwu, ya mere ahapụkwala ya ka a ghara ilebara ya anya .
Udia okụk America
Ekwesịrị inye ndị na-atụ egwu nri opekata mpe 2 ½ ruo iko 4 nke nkịta nri kwa ụbọchị, kere atọ na anọ nri. Ọ ga - enyere aka igbochi torsion nke afọ, nke bụ ọnọdụ nkịtị ma bụrụ nnukwu ọnọdụ n'ọtụtụ ụdị.
Osisi a ga - erite uru site na nri nkịta dị nkenke nwere obere ọka dị ka ọka nwere ike ibute nfụkasị. O kwesịkwara ịdị elu na anụ na Omega 3 fatty acids iji zụlite ọkpụkpụ siri ike ma kwado akwara ike.
Ihe oriri bara ụba chondroitin ma ọ bụ glucosamine bụ ezigbo nhọrọ iji mee ka ọkpụkpụ anụ ụlọ gị nwee ahụ ike ma zere ọrịa nkwonkwo ọ bụla nwere ike.
Ọ bụrụ na ị nwere oge na mmefu ego iji nye nri nri pal gị nri, nke ahụ ga-adịkwa mma! Dị ka Benzo na nri obi a.
Naanị jide n'aka na nri ị na-enye nkịta gị dabere na afọ ndụ ya, ogo ya, ogo ọrụ ya, na ahụike ya.
Ihe eji edozi ndi American Bulldog Pitbull mix bu dị ala ruo n'ókè . A na-asa brushing naanị ihe dị ka ugboro abụọ n'izu - ma e wezụga na oge nke ịwụfu elu ebe achọrọ ihicha kwa ụbọchị.
Nye ya saa ahụ naanị mgbe ọ dị mkpa, dị ka mgbe ọ ruru unyi ma ọ bụ isi isi. Ihichapu ngwakọta Bulldog Pitbull na akwa mmiri mmiri ga-ezu iji hichaa ya ma wepụ ntutu isi ọ bụla.
Ezé ya kwesịrị ịsachasị ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ n'izu, ebe a ga-egbutu mbọ mgbe ha toro ogologo ma ọ bụ hụ ka ha na-akụ ala. Enwekwara ike ịlele ma kpochapu kwa izu.
Harddị ngwakọta siri ike nke American Bulldog na Pitbull na-ebute obe nwere ike ịnwe ndụ n'ozuzu ya 10 ruo 13 afọ . N'agbanyeghị nke ahụ, ngwakọ nwere ike keta ụfọdụ nrịanrịa ahụike nke nne na nna ha bụ ezigbo ụmụ.
A maara onye nnọchi anya bekee nke American Bulldog maka ọtụtụ ọrịa dịka hip dysplasia, nke a na-ahụkarị na nkịta dị mkpụmkpụ.
Lekwasị anya na ịnọgide na-enwe usoro mmega ahụ na nri agbakwunye nke ga-enyere aka igbochi nke a na Bullypit gị.
N'ihi imi ha dị mkpụmkpụ, nwa nkịta gị nwekwara ike ịzụlite Brachycephaly Airway Obstructive Syndrome , nke nwere ike ịkpata nnukwu nsogbu iku ume.
Uwe oyi akwa nke nne na nna Pitbull na-emekwa ka ụdị a bụrụ nke na-emetụta nrịanrịa.
Ọrịa ndị ọzọ na-ahụkarị nke nwere ike imetụta ngwakọta American Bulldog Pitbull bụ hypothyroidism , ọrịa obi, nsogbu anya, na ịzụkọtara ọnụ.
Ekele maka teknụzụ, ị nwere ike ịchọta ụmụ akwụkwọ dị adị n'ịntanetị! Ọ bụrụ n ’ị na - eche echiche ị nweta nwa prụ American Bulldog Pitbull, ị nwere ike ịtụ anya na ha ga - eri etiti $ 250 na $ 2,000 .
Ọnụahịa nke Bullypit ga-adabere na ihe dịka ọnọdụ nke onye na-azụ ihe, ewu ewu nke ulo nkita, ọbara ọbara nke ndị nne na nna, na nnweta nke ụmụ nkịta.
Ikwesiri iburu n'uche nkezi mmefu kwa afọ , na ego ụgwọ ọgwụ na mbụ. Ọnụ ego ahụike kwa afọ nwere ike ịdị site na $ 485 ruo $ 600. Mgbe ahụ mmefu ndị ọzọ nwere ike ịbụ ngụkọta n'etiti $ 510 na $ 650 kwa afọ.
American Bulldog Pitbull mix ndị na-eme ihe
Mgbe ị na-achọ nwa nkita Bullypit zuru oke, ọtụtụ echiche na nlekọta kwesịrị ịbanye n'ịgbalị ịchọta ezigbo onye na-azụ ihe.
Brezụ ozuzu oke nke American Pitbull na American Bulldog nwere ike ibute nkịta na-eme ihe ike.
Gbalịa izere ịzụta ngwakọ a site na ụlọ ahịa anụ ụlọ ma ọ bụ ebe ị na-ejighị n'aka na a gbasoro ụkpụrụ omume ozuzu.
Iji malite nyocha gị maka nwa nkịta American Bulldog Pitbull, chọọ ndị na-azụ ihe na-ahụ maka Pitbull ma ọ bụ Bulldog mixes, dị ka Okporo Linezọ Okporo .zọ na Memphis, TN.
Nwekwara ike ịlele akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta, dị ka nke a Ibe Facebook , ebe ị nwere ike ịchọta American Bulldog Pitbull mix puppies maka ọrịre. E nwekwara ebe ahịa na-enye Pitbull mixes na American Bully mixes.
Nwa nkita Lancaster
N'ihi ọdịdị nke ụdị a, ị nwere ike ịchọta American Bulldog Pitbull mix na ebe obibi ị nwere ike ịnabata ma ọ bụ rehome.
Dabere na oge gara aga, nnapụta nke obe a nwere ike ịchọ oge dị ukwuu na nraranye n'ihe gbasara ọzụzụ, mmekọrịta, na mmega ahụ. Organizationsfọdụ ụlọ ọrụ nnapụta na-azụ nkịta na-anọnyere ha, yabụ na nke a bụ ihe ị nwere ike ịrịọ ndo.
Ndị a bụ ụfọdụ ebe ị nwere ike ịmalite nyocha gị maka Bulldog Pitbull maka nkuchi:
Shaw Pitbull Nnapụta (Columbus, MS)
Ezigbo Rap (Oakland, CA)
Mid-America Bully reeddị Mmepụta Mgbapụta (Kansas City, MO)
Nnapụta Fresno Bully Rescue (Sanger, CA)
Bulldog Club nke America nwere a nnapụta netwọk ebe ha na-enye ndepụta nke otu nkịta na nkịta enwere ike ịnabata ha na steeti.
Bredị a, ọ bụ ezie na ọ bụghị ezigbo anụ ụlọ maka mmadụ niile, na-egosi iguzosi ike n'ihe siri ike ndị ọkacha mmasị ya.
Thedị nchebe, ike, na ume nke Bullypit na-eme ka ha bụrụ ndị kachasị mma maka ndị nwe nkịta na-arụsi ọrụ ike ma nwee ahụmahụ bụ ndị dị njikere itinye oge ọzụzụ, mmega ahụ, na ịmekọrịta nkịta ha.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ọhụụ, ị nwere ike ịhụ ụdị agwakọta a na-esi ike, na-eme ihe ike, na-esikwa ike ịchịkwa.
Kedu ihe ị nwere ike ikwu maka nkịta a na-emepụta ihe? You nwere ngwakọta American Bulldog Pitbull? Kekọrịta akụkọ gị na anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru!
Pitbull Chihuahua Mix: Nduzi nke inweta Chipit
Eziokwu ị kwesịrị ịma maka ụlọ nyocha ọlaọcha
shih tzu nwa nkịta poodle ụmụaka
kedu ihe ọ pụtara mgbe mkpịsị nkịta na -ekpo ọkụ
ngwakọta husky na -adị obere
obere nkịta dị ka anụ ọhịa bea
German onye ọzụzụ atụrụ tan na nwa
bichon frize na cavalier eze charles spaniel